Ama-movie ongawabuka ku-YouTube MAHHALA (futhi asemthethweni) | Nginike isikhathi sokuphumula
UGabriela moran | | Cine, I-cinema yakudala, Cinema by izinhlobo
I-YouTube isengenye yamapulatifomu amakhulu futhi asetshenziswa kakhulu lokho kusebenza njengendawo yokuxhumana nabantu. Abasebenzisi ngokuvamile babelana ngamavidiyo, yingakho kukhona ithuba lokukwazi ukubuka ama-movie agcwele mahhala. Kodwa-ke kunamalungelo okukopisha kanye nemithethonqubo ethile ekhawulela okuqukethwe yikhasi ukuze lingaweli ekuvinjelweni komthetho. Ngalesi sikhathi Nginethulela amanye ama-movie ongawabuka ku-YouTube mahhala nangokomthetho nokuthi ineziza ezithokozisayo. Uma ungumthandi wama-movie wakudala, awukwazi ukuyeka ukufunda okuqukethwe engikulungiselele!
Yize kuyiqiniso ukuthi amapulatifomu okusakaza anengxenye enkulu yemakethe phakathi kwabasebenzisi bawo, i-YouTube imele inketho yamahhala enezinketho ezingatholakali kwamanye amapulatifomu. Singakuthola konke kusuka kumadokhumentari kuya ezifundweni ezinhle zama-movie! Ngikumema ukuthi uqhubeke nokufunda ukuze uthole okuhle kakhulu i-YouTube onakho mayelana nakho amafilimu wesici akudala angabekiwe kubunikazi.
Izinketho engizethula zifana nesikhathi lapho ubuchwepheshe babukude kakhulu nalokho esikwaziyo namuhla: zimnyama futhi zimhlophe kanti ezinye zihambisana nama-movie athule. Noma kunjalo lIkhwalithi yezindaba iphakeme kakhulu futhi inenani elingenakubalwa lamasiko. Ukukhethwa kukhombisa amafilimu afanele abalingiswa abanjengoCharles Chaplin, kanye nefilimu yokuqala ye-vampire, enye yamafilimu we-zombie aphayona nayo iyethulwa, kanye nezindaba ezinombono ezivela ngokuzayo nezindaba ezihlanyayo ezibandakanya ababulali kanye ne-hypnosis.
1 Ukugijimela kwegolide
2 I-alamu ku-expresso (Intokazi iyanyamalala)
3 I-Nosferatu: i-symphony yokwesaba
4 Idolobha elikhulu
5 Ubusuku be-Living Dead
6 Imishini kaGeneral
7 IKhabinethi kaDkt Calgary
8 Ngabe kukhona amanye ama-movie ongawabuka ku-YouTube ngokusemthethweni?
Kwaqala ngo-1925 futhi kunjalo inkanyezi yesithonjana se-movie uCharles Chaplin, naye owabhala, waqondisa futhi wakhiqiza ifilimu. I- "The Golden Rush" ithathwa njengomunye wemisebenzi yakhe edume kakhulu futhi yathola amagama amabili wokuphakanyiswa kuka-Oscar ngenkathi kukhishwa uhlobo lomsindo ngo-1942.
Impikiswano ithi ngokususelwa kunyathela ofuna igolide futhi yathuthela eKlondike eCanada lapho inqwaba yezinto ezibonakalayo eziyigugu kwakucatshangwa ukuthi zikhona. Endleleni, umangazwa yisiphepho esimphoqayo ukuba aphephele endlini eshiyiwe, okuyikhaya lombulali oyingozi! Ukudalelwa kuletha isivakashi sesithathu endlini futhi ngenxa yesiphepho akekho ongashiya le ndawo.
Abalingiswa abathathu bafunda ukuhlala ndawonye kulokho abangakushiya endlini. Ngemuva kwezinsuku ezimbalwa, isiphepho siyaphela futhi ngamunye uqhubeka nendlela lapho isiphetho sabo besinenhloso efanayo: ukuthola imayini yegolide!
Ngesikhathi sendlela ahamba ngayo umlingisi wethu omkhulu, uhlangana neGeorgia. Intokazi enhle ethandana nayo kodwa egcina ihlukane nayo. Indaba isitshela ukuzidela okuningana abalingiswa bethu okufanele badlule kukho ngaphambi kokufinyelela umgomo wabo wokuqala. Kuyisizathu sokuphawula ukusebenza okungenaphutha kukaChaplin owayehlale ekhuthaza izethameli ngamahlaya akhe angavamile afaka amafilimu akhe amnyama namhlophe.
Ukuphela kwendaba kujabulile, ngoba umlingiswa oyinhloko uthola lokho akufunayo. Kodwa-ke, ekugcineni uyabona ukuthi lokho akuzuzile ngempela kubaluleke ngaphezu kwegolide abekade elifuna.
I-alamu ku-expresso (Intokazi iyanyamalala)
I-thriller enhle futhi yakudala egcwele ukusola yisihloko sesihloko okukhulunywa ngaso. Yakhishwa esikrinini esikhulu ngo-1938 kanti i-New York Times yayibeka njenge-movie ehamba phambili ngalowo nyaka. Yifilimu yaseBrithani eqondiswe ngu-Alfred Hitchcock, le ndaba isuselwe encwadini ethi "The wheel spins." Abalingisi abaphambili nguMargaret Lockwood, uPaul Lukas, uBasil Radford Redgrave noDame May Whitty.
Uzungu lusitshela uhambo lokubuyela ekhaya a abagibeli abambalwa ababuyela eLondon, ikhaya labo. Ngenxa yesimo sezulu esingesihle isitimela siyaphoqeleka ukuthi sime ukuze abagibeli bagcinwe bephephile; umbhangqwana ojikelezayo uhlala ubusuku obude edolobheni elikude. Ingxenye ethokozisayo iqala nini lapho bebuyela esitimeleni futhi bayabona ukuthi umgibeli unyamalele. Uhambo lokuya ekhaya olungahlukaniswanga lwaluzophenduka iphupho elibi!
Wonke umgibeli uba umsolwa. Ukuthuthuka kwendaba kuveza izimfihlo ezithokozisayo ezingaphezu kweyodwa yazo….
I-Nosferatu: i-symphony yokwesaba
Uma ungumthandi we-vampire, kufanele uyibone! INosferatu yifilimu yokuqala ehlobene nendaba eyiqiniso kaDracula eyabhalwa nguBram Stoker. Ngaphandle kokuthi bekukhona impikiswano nezinkinga ezithile zomthetho zomqondisi uFriedrich Wilhelm Murnau ezibhekiswe kwabadla ifa lendaba yoqobo, le filimu ithathwa njengesiqalo samafilimu ama-vampire amahle kakhulu emlandweni wohlobo lwamafilimu.
Umbhangqwana osemusha odlala izinkanyezi endabeni, umyeni ogama lakhe lingu UHutter uthunyelwa eTransylvania ngebhizinisi ukuvala isivumelwano no-Count Orlok. Uma esefakiwe endlini yezihambi lapho, uHutter uthola umqulu we-macabre okhuluma ngama-vampire futhi umshiye ethakazekile. Kamuva uhambela isigodlo sokubalwa lapho ehlangana khona nomnikazi oyisoni.
Ngosuku olulandelayo ngemuva kokuvakasha kwakho enqabeni, UHutter uthola amamaki amabili entanyeni yakhe okuphathelene nokulunywa yizinambuzane. Akawunikanga ukubaluleka komcimbi waze wa duthola ukuthi wayekhona phambi kwe-vampire yangempela, u-Count Orlok!
Amamaki entanyeni yakhe asishiya nombuzo: Ngabe uHutter manje uzolomela igazi elifanayo njengalo umkakhe alilangazelelayo?
Yifilimu elithule elinemvelaphi yaseJalimane elakhishwa ngo-1926 nokuthi iphakamise iqiniso lomhlaba ngo-2026 okungukuthi, eminyakeni eyikhulu kamuva!
Ifilimu isitshela nge ukuhlukaniswa kwezigaba zomphakathi kanye nokucwaswa ukuthi kukhona phakathi kwalaba bobabili lapho abasebenzi behlala khona ezindaweni ezingaphansi komhlaba futhi abavunyelwe ukuphuma baye ngaphandle. Ukukhathala ukubandlululwa nokucindezelwa futhi kukhuthazwe irobhothi, lAbasebenzi banquma ukuvukela labo abanelungelo. Basongele ngokucekela phansi idolobha kanye nokuthula lapho isigaba esinelungelo lapho kutholakala khona izihlakaniphi nabantu abanamandla kwezomnotho.
Sithola abalingiswa ababili abaphambili, umholi ovela esigabeni ngasinye senhlalo, njengabaphikisi namaqhawe. Banakekela cvumelanisa izivumelwano ezisuselwa enhlonipheni nasekubekezelelaneni.
Kuyathakazelisa indlela evezwa ngekusasa ukuthi namuhla ayisekude kangako.
IMetropolis yakha i- Ifilimu yokuqala ezoklonyeliswa ngesigaba esithi "iMemory of the World" enikezwe yi-UNESCO. Ukuqashelwa kungenxa yokujula okwadingidwa ngakho izindaba zenhlalo.
Ubusuku be-Living Dead
Ifilimu ethusayo eyakhishwa ngo-1968 nokuthi ivuselele uhlobo lwama-movie agxile ku-zombie. Abanye bathatha njengefilimu ehamba phambili kulesi sigaba ngenxa yeqhaza elabanjwa "abahamba befa" kulesi sakhiwo futhi elaba nomthelela omkhulu kumafilimu azokhishwa ngemuva kwalokhu. Ngenxa yempumelelo eyenziwe yile ngqikithi, kwakhiwa isaga esinezahluko eziyisithupha. Ama-sequels akhishwa ngeminyaka ye-1978, 1985, 2005, 2007 ne-2009.
Ifilimu yokuvula, etholakala ku-Youtube, imayelana iqembu labantu elizithola lihlukanisiwe nohlobo oluthile lwepulazi bese lilwela izimpilo zalo ngemuva kokuthi iqembu labafileyo selibuyele empilweni. Indaba iqala ngabazalwane ababili abaphephela kuleyo ndawo futhi abathola ukuthi akubona bodwa abazama ukusinda.
Okwesikhathi sayo, ifilimu yenze ukwethuka phakathi kwezethameli ngenxa yezigcawu ezinobudlova nezingajabulisi ezenziwe amaZombi.
UBuster Keaton ungumlingisi owaziwayo kusukela ngesikhathi sikaCharles Chaplin. Yifilimu ethule, emnyama nomhlophe engeyehlobo lomdlalo wamahlaya. Kuguqulwa kwesigameko sangempela esenzeka ngesikhathi seMpi Yombango e-United States ngo-1862.
Umlando usitshela ngempilo ka UJohnnie Gray, umshayeli wesitimela wenkampani yaseWestern & Atlantic Railroad. Unothando no-Anabelle Lee, omcela ukuthi angene embuthweni wezempi lapho kuqala impi. Noma kunjalo, i-protagonist yethu ayemukelwa ngoba babheka amakhono akhe njengomakhenikha njengowusizo kakhulu. Lapho ezwa ngokwenqaba kwebutho, u-AUNabelle ushiya uJohnnie njengegwala.
Kuthatha isikhashana ukuthi lowo owayengumlingani wakhe ahlangane futhi esimweni esingesihle esibeka izimpilo zabo engcupheni.
Kuyafaneleka ukusho ukuthi le filimu ayizange yamukelwe kahle ngesikhathi iqala ukukhonjiswa ngo-1926, kwaze kwaba yiminyaka kamuva lapho yathola ukuthandwa nokuthi yathathwa njengendima ephambili umlingisi ake wayenza.
IKhabinethi kaDkt Calgary
Siqhubeka nohlobo oluthule futhi kokumnyama nokumhlophe. IKhabinethi kaDkt Calgary yifilimu ethusayo enemvelaphi yaseJalimane eyakhishwa ngo-1920. LIndaba yakhe isitshela ngokubulawa kwe-psychopath enekhono lokulutha ingqondo futhi osebenzisa umuntu ohamba ubuthongo ukwenza lawo macala!
UDkt Calgary ungungqondongqondo osebenzisa ikhono lakhe nobuthakathaka bomuntu othanda ukulala ukwenza uhlobo lombukiso ojabulisa abantu bendawo. Indaba ixoxwa ngokubheka emuva futhi ixoxwa nguFrancis, omunye wabalingiswa abakhulu endabeni.
Ngokuvamile, indaba izungezwe isitayela esimnyama sokubuka ngenxa yokuthi isakhiwo sikhuluma ngamatimu ahlobene nokuhlanya nemidlalo yengqondo. Le filimu ithathwa njenge- umsebenzi omkhulu we-cinema expressionist waseJalimane. Isikripthi sefilimu sisekelwe kokuhlangenwe nakho komuntu siqu kwabasunguli bakhe: UHans Janowitz noCarl Mayer. Bobabili babengama-pacifists futhi bazama ukuveza ngendlela eyinqaba amandla uhulumeni awasebenzisa phezu kwebutho.Ukuze bakwazi ukufeza lokhu, bakha uDkt Calgary kanye ne-sleepwalker: abamele uhulumeni namasosha ngokulandelana.
Akungabazeki ukuthi yisithabathaba somqondo esidlala ngezingqondo zababukeli futhi simangaze sibonga indlela le ndaba evezwa ngayo.
Ngabe kukhona amanye ama-movie ongawabuka ku-YouTube ngokusemthethweni?
Impela ikhona! Izihloko engizethule zingukunambitheka okuncane kokuqukethwe okungokomthetho esingakuthola. Ngalesi sikhathi ngigxile kumafilimu akudala avuse intshisekelo enkulu ngokuhamba kwesikhathi. Ngaphezu kwalokho, kunama-documentary namafilimu amaningi akhona manje futhi siyakwazi ukuwajabulela ngokusemthethweni nangaphandle kwamahhala.
Angithandi ukuvalelisa ngaphandle kokusho kuqala ukuthi kunamaqhinga amaningi wokuthola okuqukethwe kwamahhala kuzingxenyekazi ezifana ne-YouTube, noma kunjalo, masikhumbule ukuthi eminingi yale mikhuba ayikho emthethweni. Ake sizame ukufaka isandla emhlabeni ongcono ukugwema izenzo ezingezona zokuziphatha eziphula ilungelo lobunikazi futhi lokho futhi kufanele umsebenzi obandakanyekayo ekwenzeni imikhiqizo yamafilimu.
Ngiyethemba ukujabulela ukukhethwa kwama-movie ongawabuka ku-YouTube ngokusemthethweni!
Indlela ephelele ye-athikili: Nginike isikhathi sokuphumula » Cine » Ama-movie ongawabuka ku-YouTube mahhala (futhi asemthethweni)